PPS AP Exam Info (Somali) – AP Test Service
PPS AP Exam Info (Somali)
Dugsiyada Dadweynaha Portland – Diiwaangelinta & Siyaadaha Imtixaanka AP
Ardayda iyo Qoysaska PPS
Fadlan dib u eeg macluumaadka soo socda si aad iskugu diiwaangeliso imtixaanada AP ee Maajo 2019 (Meelaynta Horumarsan). Si taxadar leh u akhri iyada oo siyaasaduhu iyo nidaamyadu isbeddeleen taasi oo loogu talagalay sanad dugsiyeedka 2018-19. (Haddii aadan ahayn arday dhigta dugsiga ay PPS leedahay balse aad jeclaan lahayd in aad qaadato imtixaanka AP, fadlan Anna Lortz kala xiriir xafiiska Degmada PPS ee AP: 503-916-3517.)
TAARIIKHAHA & WAKHTIYADA IMTIXAANKA: Maajo 6-10, 2019 iyo Maajo 13-17, 2019
Imtixaannada subaxdii. Albaabadu waxay furan yihiin 7:15; Wakhtiga qaabilaadu wuxuu bilaabmayaa 7:30; Imtixaanadu waxay joogsanayaan qiyaastii 12 galabnimo.
Imtixaannada galabtii. Albaabadu waxay furan yihiin 11:15; Wakhtiga qaabilaadu wuxuu bilaabmayaa 11:30; Imtixaanadu waxay joogsanayaan qiyaastii 4:00.
Ardayda looma oggola in ay waqti hore ka baxaan wixii imtixaan ah ee ay leedahay AP. Ardayda leh ciyaaraha iyo shaqada la qabto dugsiga ka dib waxay mas’uul ka yihiin in ay tababarayaasha ama cidda ay u shaqeeyaan ku wargeliyaan waajibaadkooga imtixaanka AP.
Imaanshaha Wakhti dambe – Ardayda timaada ka dib marka uu imtixaanku bilaabmo loo ma oggolaan doono in ay gelaan.
Maqnaanshaha – Dhammaan ka maqnaanshaha imtixaannada AP waxaa lagu wargelin doonaa dugsigaaga sare. Haddii aad imtixaanka uga maqnaato sababo ay oggolaatay Guddiga Kulliyadda, waxaa laga yaabaa in aad awoodo in aad qaadato imtixaan dambe.
Luqadda Isbaanishka AP iyo Aragtida Muusikada AP waxaa laga yaabaa in ay socdaan wakhti ka dambeeya duhurka iyada oo ay sababtu waxyaabo looga baahan yahay duubista cajaladaha. Fadlan soo qaado cunto fudud oo dheeraad ah.
GOOBTA: Dhammaan imtixaannada AP waxay ka dhici doonan Xarunta Carwada ee Oregon, 2060 N. Marine Drive, Portland, OR 97217- oo ku taala Khadka Jaalaha ah ee Tareenka TriMet MAX. Imtixaannada AP Chinese iyo AP Japanese waxay ka dhici doonaa Benson Dugsiga Sare ee Benson, 546 NE 12th Ave, 97232. WAXAAN SI AAD AH UGU TALINAYNAA in ardayda meesha lagu dejiyo, gaari la wada raaco ama la isticmaalo TriMet.
~ Oggolaada wakhti ku filan oo loogu talagalay isku socodka gaadiidka si loo gaaro goobta imtixaanka ka hor inta aanay qaabilaadu bilaabmin. ~
Ardayda gawaarida dhiganaysa Xarunta Carwada waxay heli doonaan foojar loogu talagalay dhigashada gawaarida oo lacag la’aan ah marka ay dhameeyaan imtixaanka.
DIIWAANGELINTA: Waa in aad buuxisaa diiwaangelinta internet-ka inta u dhaxaysa Diisambar 10 ilaa Febraayo 15 si aad u awoodo in aad ka qayb qaadato imtixaanka AP. Ka qayb qaadashada fasalka AP ma damaanad qaadayso in aad hesho boos imtixaan.
Oggolaanshaha: Adiga waalidkaaga/mas’uulkaaga waxay u baahnaan doonaan in ay bixiyaan saxiix elektaroonig ah oo ay ku oggolaanayaan:
In aad haysato oggolaansho aad ugu safrayso/ugana soo noqonayso goobta imtixaanka ee dhismaha ka baxsan.
In aad u hoggaansami doonto xeerarka ammaanka ee imtixaanka sida ku dhigan tilmaamaha la raacayo ee PPS oo ku qoran website-kan diiwaangelinta iyo sidoo kale Meesha wax lagu qoro ee Guddiga Kulliyadda ee loogu talagalay Ardayda iyo Waalidiinta AP.
Diiwaangelinta waa mid waajib ah: Ardayda looma oggaal doono in ay balan la’aan “iyaga oo iska socda yimaadaan” maalinta imtixaanka ee aysan hore iskugu diiwaangelin. Waa IN AAD isdiiwaangelisaa muddo aan ka dambeynin Febraayo 15-keeda, 2019.
Si la iskugu diiwaangeliyo laba imtixaan oo la bixiyo isla taariikh isku mid ah, waxaad si buuxda u buuxisaa foomka diiwaangelinta una soo gudbisaa lacagta. Ardayga waxaa la soo xiriiri doona Adeega Imtixaanka ee AP si ay ula socodsiiyaan kuwa ka mid ah labada imtixaan ee AP ah ee loo qoondeeyay taariikhda kale.
Ardayda waxaa laga yaabaa in aanay u fariisan AP Calculus AB iyo BC labadoodaba sanad isku mid ah. Si taxadar leh u dooro.
Taxadar samee marka aad isku diiwaangelinayso LUQADDA Ingiriisiga ama SUUGAANTA Ingiriisiga. Dooro mida saxda ah. La tasho Macallinkaaga AP haddii aadan wax kala hubin.
BIXINTA LACAGTA: Lacagta imtixaannada waa in ay horay laga sii bixiyaa. Diiwaangelintu waa mid aan dhammeystirnayn ilaa iyo inta la laga helayo lacagta.
Kharashka: Imtixaan kasta waa $72. (Siminaarka AP waa $120.)
Kaararka Credit-ka ama Bangiga: Ka bixi internet-ka adiga oo isticmaalaya nidaamkan.
Jeeg ama Money Order: Raac tilmaamaha adiga oo isticmaalaya nidaamkan waxaanad lacag bixinta boosta ugu soo hagaajisaa cinwaanka lagu bixiyay email-ka. (Waa in ay ku taalaa shaabad aan ka dambeyn Febraayo 8, 2019.)
Lacagta caddaanka ah: Ugu dir lacagta caddaanka ah diiwaan hayaha dugsigaaga muddo aan ka dambeyn Febraayo 8, 2019.
Lacagtu waa mid aan suurtagal aheyn in la isku soo celiyo marka diiwaangelinta imtixaanka la dhammeystiro isla markaana lacagta la helo.
LACAG ISKA DHAAFIDA: Waxaa loogu talagalay ardayda u baahan in wax laga dhaafo, lacagtu waa $0 halkii imtixaan ee AP.
Fadlan waxaad aragtaa Isku duwaha Meelaynta Horumarsan ee dugsigaaga si aad u hesho Astaantaada Lacag Dhimista ‘Fee Reduction Code’. Waa in aad haysataa sawir aqoonsi si aad u hesho lacag iska dhaafida. Waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay in lagu helo lacag iska dhaafidu waa Febraayo 8, 2019 marka la gaaro 3:00 galabinimo.
Marka aad hesho astaantaada lacag iska dhaafida ‘waiver code’, waxaad awoodi doontaa in aad iska diiwaangeliso website-ka APTS ee loogu talagalay lacagta dhimay. Waa in aad isdiiwaangelisaa muddo aan ka dambeynin Febraayo 15-keeda, 2019.
Isticmaalka astaanta ‘code’ aan la oggolaanin waxay keeni doontaa in la joojiyo dalbashada imtixaanka ilaa iyo inta laga helayo lacagta oo buuxda.
***Iyada oo ku xiran nooca lacag iska dhaafida ee la helay, waxaa laga yaabaa in ardayda lagu soo dalaco lacagta imtixaanka ee aan la isticmaalin haddii ay ka soo qayb gali waayaan isla markaana dhammeysan waayaan imtixaannadooda AP.***
IMTIXAANKA KA HOR: DHAMMAAN ARDAYDA PPS EE ISKU DIIWAANGELISAY IMTIXAANNADA AP WAA IN AY KA SOO QAYB GALAAN KULAN HORDHAC AH OO AH DHANKA MAAMULKA OO LA ISKU WAAJIBIYAY oo Abriil ka dhacaya dugsigooda sare. Nidaamkani wuxuu qofka u badbaadiyaa waqti isaga oo yareeya walwalka la xiriira maalmaha imtixaanka.
INTA LAGU JIRO IMTIXAAKA: Fadlan soo qaado waxyaabaha soo socda:
Sawirkaaga aqoonsiga (wuxuu noqon karaa sawir aqoonsi oo ay dowladda ama dugsigu bixiyeen)
Ugu yaraan laba qalin qori oo afaysan oo ah qalin qoriga lambarkoodu yahay # 2 oo ay la socdaan tirtirayaal ‘erasers’ (nooca qalin qoriga ee farsamada ‘mechanical pencils’ lama oggola)
Ugu yaraan laba qalinka khadka leh oo midabka khadkoodu yahay madow ama buluug madow xigeen ah oo loogu talagalay qoritaanka jawaabaha (qalinka wax lagu calaamadeeyo iyo qaladka lagu saxo ‘white-out’ lama oggola)
Xisaabiye garaaf leh oo loogu talagalay Biology-ga, Calculus AB/BC, Chemistry-ga, Physics-ka, iyo Xisaabaadka (fiiri tilmaamaha la raacayo ee xisaabeyaha ee laga helayo collegeboard.com/ap/calculators). Ardaydu waxay soo qaadan karaan 2 xisaabiye balse looma oggola in ay dadka la wadaagaan xisaabiyeyaasha inta lagu jiro imtixaanka. Xaqiiji in ay wataan baateriyo cusub.
Mastarada ama ta geesaha toosan leh (waxaa loogu talagalay imtixaannada Physics-ka oo kaliya)
Cunto fudud/cabitaan ku jira bacda ‘Ziploc’ oo si fiican wax looga arki karo oo gooni ka ah boorsada caadiga ah ama boorsada dhabarka
Dhar diiran oo loogu talagalay in ay kala sareeyaan
Ogow: MA heli doontid boorsadaaada caadiga ah ama boorsadaada dhabarka waqti kasta inta lagu jiro imtixaanka, oo ay ku jiraan waqtiyada biririfta/nasashada.
Qalabka elektaroonig ah (telefoonada, saacadaha casriga ah ama tikloojiyada la xiran karo ee nooc kasta leh, kambiyuutaradooda gacanta’ laptops’, qalabka Bluetooth, qalabka wax lagu dhageysto iyo wax lagu duubo ee la qaadan karo—MP3 player, iPod®, iwm.—kaamarooyin ama qalabka sawirrada, qalabka laga geli karo internet-ka, qalabka waqtiga sheega oo nooc kasta leh, saacadaha dhawaqa leh iyo wixii kale ee elektaroonig ama qalab isgaarsiineed ah) waa ka mamnuuc qolka imtixaanka iyo goobta biririfta/nasashada.
Haddii uu arday ku isticmaalo ama lagu arko mid kasta oo ka mid ah qalabkan elektarooniga ah qolka imtixaanka ama inta lagu jiro biririfta/nasashada, waa lagala wareegi doonaa waxaana ardayga laga saari doonaa imtixaanka. Haddii uu telefoon, saacad ama qalab kale ee elektaroonig uu dhaco, gariir sameeyo, dhawaq sameeyo, iwm. qolka imtixaanka dhexdiisa inta lagu jiro imtixaanka, waxaa laga yaabaa in ay joojiso imtixaanka QOF KASTA oo ku sugan qolka.
Waxaan qirayaa in aan si buuxda u akhriyay una fahmay siyaasadaha isku diiwaangelinta imtixaanka AP.
Haddii aad diyaar u tahay in aad isku diiwaangeliso imtixaannada, halkan riix
AP Exam FAQs (Somali)